Linux ကို Windows မှာလို Windows Partition နဲ့ Data Partitions ခွဲသုံးလို့ ရပါသလား ?? - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Linux ကို Windows မှာလို Windows Partition နဲ့ Data Partitions ခွဲသုံးလို့ ရပါသလား ??
Linux ကို Windows မှာလို Windows Partition နဲ့ Data Partitions ခွဲသုံးလို့ ရပါသလ&
ပုံမှန်အားဖြင့် ကျွန်တော် တို့ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Windows Os မှာဆို (Eg: Hard Disk 500 GB ရှိတယ်ဆိုပါစို့) Windows အတွက် C: Partition (150 (or) 100 GB) လောက် ပိုင်းလိုက်တယ် ။ ပြီးတော့ ကျန်တာကို Data အတွက် D: Partition အနေနဲ့ Data တွေ ထည့်ပြီး သုံးကြတယ် ။ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် Windows ကျသွားခဲ့ရင်လဲ Data တွေ မပျက်ဘူး ။ Windows ရှိတဲ့ C: Partition ကို Format ရိုက်ပြီး windows ပြန်တင် သုံးလိုက်ယုံပဲ ။
အခု ကျွန်တော် သိ့ချင်တာက Linux မှာရော အဲ့လို သုံးလို့ ရပါသလား ။ ကျွန်တော် အခု Ubuntu ကို လေ့လာပါတယ်။ ကျွန်တော့် Laptop ကို ubuntu Os တင်သုံးချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် Linux Partitions တွေနဲ့ ပါတ်သက်လို့ သေချာ မသိ့ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ Os တင်တဲ့အခါမှာလဲ အထက်က ကျွန်တော် ပြောသလို အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Partition ဘယ်လို ပိုင်းရမလဲ ။ ပြီးတော့ တကယ်လို့ Linux Os ၇ှိတဲ့ Partiton ကို ဖျက်လိုက်ရင် Data တွေ ပျက်ကုန်မှာလား ? ။ ကျန်နေခဲ့မှာလား ? Myanmar Family ထဲမှာ ရှိတဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမ အားလုံး သိ့တဲ့သူများရှိရင် ကူညီ ဖြေကြားပေးစေချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘယ်လို အသုံးပြုရမလဲ ဆိုတဲ့ Configuration လေးပါ ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ် ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ .........။ လေးစားစွဖြင့် .........................
20-10-2014, 02:58 AM
ပြန်စာ - Linux ကို Windows မှာလို Windows Partition နဲ့ Data Partitions ခွဲသုံးလို
ရတယ်။ ၀င်းဒိုး data partition ကို Linux က သုံးလို့လဲ ရတယ်။ သီးသန့် Linux အတွက် data partition ထားလဲ ရတယ်။
မှာ ကျွန်တော်လဲ ဖတ်နေတယ်။
Partition တခါမှ မပိုင်းဖူးရင် Virtual Box မှာ partition အရင် ပိုင်းကြည့်ပါ။ နားလည်သွားပြီဆိုမှ တကယ့် hard drive မှာ ပိုင်းပါ။ မဟုတ်ရင် မှားဖျက်မိတာမျိုး ခဏခဏ တွေ့ရပါတယ်။ နားလည်သွားရင်တော့ ၀င်းဒိုးထက် partition ပိုင်းရ ပိုလွယ်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ diaper အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီယွန်, Aung Aung, PyaitSone, tu tu, zo
20-10-2014, 03:38 AM
Linux အကြောင်း လေ့လာချင်ရင် edx မှာ Linux Foundation က course ရှိတယ်။ အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ တရက်လောက် အချိန်ပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ။ ပိုက်ဆံတော့ သွားမပေးပါနဲ့။ certificate က အပြင်မှာ သုံးလို့မရပါ။
As with any endeavour of this scale, the initial version of the course was not perfect and we've been working to make it even better. Of course, we didn't do this on our own. We truly appreciate the patience and diligence of our early users, who pointed out many places where corrections were needed. There are several updates we'd like to make (such as reordering some of the chapters), which would seriously disrupt the experience for users who are currently in the course.
Asaresult, we've decided to issueasecond version of the course, which will start on January 5, 2015. The current version will be available until December 20, 2014. You'll therefore have until then to complete the course and take the final exam if you wish to earnacertificate of completion or the Verified Certificate you may have paid for. The second version will be available for enrollment starting October 2nd.
အခုလေ့လာချင်ရလဲ ရတယ်။ Course ပြန်ပြင်ထားတာ လေ့လာချင်ရင် Jan5နေ့ထိစောင့်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် အခုလေ့လာပြီး Jan5မှ ထပ်ပြီး လေ့လာပါ။
ဟုတ်ကဲ့ အခုလို ဖြေကြားပေးကြတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. ခင်ဗျာ
Hiren's BootCD ကိုပိုင် Applications 27 13-06-2011 08:22 AM